Famerenana ny Moto 360: izao no fehin-kevitra | Androidsis
Famerenana ny Moto 360, ny smartwatch manintona indrindra amin'ny Android Wear
Alfonso ny voankazo | | hevitra, SmartWatch
El Moto 360 dia efa tonga tany Espana. Iray amin'ireo rindrambaiko manintona indrindra manintona ny famolavolana azy io ary nandeha mafy izy mba hifaninana amin'ny mavesatra mavesatra toa ny G mijery r na ny Samsung Gear S.
Manararaotra ny fanombohana ofisialy ny Moto 360 any Espana androany dia mitondra anao aho a Moto 360 famerenana aorian'ny fampiasana telo herinandro izay hamahanay ny tsiambaratelo rehetra momba ny finday vaovao Motorola.
1 Volavola mahafinaritra sy kanto
2 Toetra mampiavaka ny Motorola Moto 360
4 Maharitra hafiriana ny bateria Moto 360?
Volavola mahafinaritra sy kanto
Misy zavatra tsy azon'ny olona mandà: ny Moto 360 dia a tena tsara ny smartwatch. Ny endriny boribory, mampiavaka azy amin'ny ankamaroan'ny mpifaninana aminy, sy ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana vatana azo entina Motorola dia manazava fa nitady terminal izay nahafinaritra ny mason'izy ireo.
Vita amin'ny aliminioma ary misy a volo vy tsy misy fangarony Ny Moto 360 dia manana famaranana mahavariana, manome fahatsapana faharetana izay tian'ny mpampiasa. Asongadino ny hazavany mahavariana, 49 grama fotsiny ny lanjany, izay mahatonga ny Moto 360 tsy manelingelina eo am-pelatanana. Izaho manokana dia tsy nampiasa famantaranandro hatry ny ela ary, na dia hafahafa aza tamin'ny voalohany ny nitondra ny Moto 360 teny amin'ny hato-tànako, raha vao zatra izany, ny marina dia tena mahazo aina sy maivana izy io.
Afaka misafidy isika endrika isan-karazany ho an'ny tarehy fiambenana, avy amin'ny mahazatra indrindra miaraka amin'ny fanjaitra mampiavaka azy, amin'ny alàlan'ny endrika minimalist kokoa. Eto amin'ny tsiro ny loko, na dia manana maodely ampy aza ianao hahitana iray izay tianao.
Andininy mahaliana iray hafa dia ny fehiny. Vita amin'ny hoditra, mifangaro tanteraka amin'ny famolavolana ankapobeny ny fitaovana izy ary mahafinaritra ny mikasika azy. Motorola dia nieritreritra ny antsipiriany rehetra ary mamela ny tady Moto 360 dia azo ovaina, na dia tiako manokana aza ilay fehin-tany tany am-boalohany. Ny fanidiana azy dia mahazo aina sy ny endrika bika manintona. Tsy mila zavatra bebe kokoa aho.
Ny hany zavatra hitako amin'ny endriny mahafinaritra dia ny haben'ny fitaovana. Ny Moto 360 dia tsy famantaranandro kely ka ny vehivavy sasany, misy fehiloha kely, dia ho hitany fa somary be.
Na dia marina aza fa ny olana amin'ny famolavolana dia misy lohahevitra, samy manana ny heviny ny tsirairay, tiako manokana ilay izy ary mampiseho fa nifantoka tamin'ny zavatra iray i Motorola: fanaovana ny toy ny famantaranandro mahazatra ny smartwatch. Ary tsy misy olona afaka mandà fa ny ekipa endrika Big M dia efa nahomby mihoatra ny. Ny Moto 360 dia misy amin'ny loko roa: mainty sy volafotsy.
Toetra mampiavaka ny Motorola Moto 360
LCD LCD 1.56 320 × 290 teboka (205 dpi) Gorila Glass 3.46mm savaivony ary hatevin'ny 11.5mm Android Wear Android 4.3 na avo kokoa IT OMAP 3630 512 MB
Rano mandeha amin'ny rano
4 GB Bluetooth 4.0; pedometra; sensor maivana ary sensor an'ny tahan'ny fo Fanamarinana IP67 320 Mah
El Voafetra ihany ny fitaovana Moto 360, zavatra mahazatra satria miresaka momba ny famantaranandro iray isika, na dia misy aza ny teboka diso fanantenana. Ny iray amin'izy ireo dia ny fahombiazan'ny batterie, izay horesahintsika avy eo ary ny iray hafa dia ny processeurany.
Ny Moto 360 dia mampifandray Texas Instruments OMAP3630 SoC, a processeur efa tonta ho an'ny fotoana sy avy amin'ny mpamokatra saika hadino amin'ny tsena Android. Na dia marina aza fa mihoatra noho ny ampy ny fahombiazan'ny smartwatch Motorola, dia hafahafa fa mampiasa processeur taloha toy izany izy ireo rehefa mampiditra Snapdragon 400 ny mpifaninana aminy. Bebe kokoa raha heverintsika fa ny Moto 360 dia tsy mora vidy kokoa noho ireo mpifaninana aminy.
Mankasitraka ny fanamarinana IP67 anao izahay mamela antsika handro tsy misy olana amin'ny fiambenana ho fanampin'ny fanolorana antsika fanoherana lehibe amin'ny vovoka. Ny antsipiriany iray hafa izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy dia ny sensor-n'ny tahan'ny fony, izay azonao atao fandaharana mba hakana ny fitempon'ny fonao isan'andro. Tao anatin'ireo fitsapana nataoko dia nisy fotoana izay tsy nahitako ny polipitra, tsy misy zavatra tsy voavaha amin'ny famerenanana imbetsaka, saingy mety hiafara amin'ny fanelingelenana vetivety izany.
Andininy miavaka hafa iray dia ny sensor sensor manodidina izay ahafahantsika mandeha ho azy ny famirapiratan'ny efijery miankina amin'ny toe-javatra iainantsika. Azontsika atao ny manitsy ny safidy toy ny jiro manodidina mba ho tsara kokoa ny famantaranandro, na dia handany haingana kokoa ny bateria aza izy.
Raha te hampihetsika ny efijery famantaranandro ianao dia tsy maintsy ahodinanao fotsiny ny tananao mba hahitana ny fotoana ary hazava ho azy izy io. Mba hamonoana ny efijery dia apetraho eo aminy ny tananao ary ny sensor jiro manodidina azy no hanao ny ambiny.
Android Wear no miandraikitra ny fanaovana ny daroka Moto 360. Azoko lazaina kely aminao ny momba ny rafi-pandidiana azo ampiasaina Google izay tsy mbola fantatrao. Raha fintinina, hilazana fa mandeha tsara amin'ny Moto 360. Tsy dia mailaka loatra amin'ny voalohany, fa raha vao mahazo ilay izy dia mahazo aina tsara raha ampiasaina.
Ny moto 360 mampiditra mikrô izay azonao ampiasaina hampiasana andian-dahatsoratra amin'ny alàlan'ny Google Now, toy ny mandray naoty na mandray ny polonganao Misy pitsopitsony ao an-tsaina: tsy mamela anao hamaly antso ny Moto 360. Izaho manokana dia tsy hitako miresaka amin'ny famantaranandroko fa ny olona mahita ny resaka ataoko dia toa tsy mahazo aina, na dia tsara aza ny mampiasa azy io rehefa mitondra fiara. Na dia noho izany aza dia ampiasananao ny hands-free an'ny smartphone ary dia izay.
Toa tsara ny famantaranandro ary ny fitaovana entiny dia mihoatra ny ampy mba hitazomana azy handeha tsara hatrany. Fotoana izao hiresahana ny Pikantsary Moto 360. Miaraka amin'ny haben'ny 1.56 santimetatra sy ny vahaolana 320 x 290 teboka, ankoatry ny hakitroky 205 dpi, ny tarehy Moto 360 dia tsy misy mahaliana.
Na dia marina aza fa tena tsara tarehy io dia misy fotoana afaka mankasitraka ireo piksela ianao, indrindra rehefa mahazo fampandrenesana izay ahitanao ny sarin'ny mombamomba ilay olona nandefa anao tany aminao. Betsaka ny zavatra nolazaina momba ny sensor ambient light. Ny marina dia manahirana be izy amin'ny voalohany. Ny fahitana fa ny famantaranandro dia tsy boribory tanteraka, noho io tsipika mainty manimba tanteraka ny endrika io, manelingelina, maninona no lavinao izany.
Tamin'ny voalohany dia nijery ny doka mainty, na dia aorian'ny fampiasana andro maromaro aza dia adinonao tanteraka izany. Io no iray amin'ireo teboka nampatahotra ahy indrindra, na dia ny farany aza tsy niraharaha an'io "lesoka" manelingelina io dia ankasitrahana.
Olana iray hafa izay tsy dia tiako loatra ny eo amin'ny sisin'ny sehatry ny boribory. Ny fanapahana eo anelanelan'ny fefy vy sy ny dial dia mamorona a vokan'ny avana izany, raha tsy manelingelina amin'ny fampiasana azy, dia tsy mijery tsara tarehy. Olana iray miseho rehefa mahazo fampandrenesana.
Tsy tiako ilay Fampisehoana Moto 360 eny ivelany. Amin'ny tontolo mihidy rehetra, ny smartwatch Motorola dia mijery tsy misy tomika, fa amin'ny andro main-tany kosa dia miova. Ny famirapiratana farany ambony dia nanjary tsy maintsy ilaina ary miteraka fihenan'ny bateria.
Farany misy olana hafa koa. Ny iray amin'ireo zavatra manelingelina indrindra amin'ny finday avo lenta dia ny dian-tànana sisa amin'ny efijery. Ao amin'ny Moto 360 dia miharihary ity olana ity ary afaka fotoana fohy dia hanana ny tontolon'ny marika nomerika ianao. Ratsy ambany nefa iray tsy maintsy raisina.
Maharitra hafiriana ny bateria Moto 360?
Ny iray amin'ireo olana mampiady hevitra indrindra momba ny Moto 360 dia ny fizakan-tenany. Tamin'ny fotoana nisy ny resabe satria 300 mAh ny bateria ary tsy 320 mAh araka ny nambaran'ny mpanamboatra azy, na dia tonga tamin'ny dingana aza i Motorola izay nanondro fa tena ny fizakan-tena 320 Mah na dia manondro fihenan'ny herinaratra aza ny baterinao.
Ny olana dia tsy afaka milaza aminao aho fa maharitra ora X ny Moto 360 noho ny antony tsotra: ny mpampiasa tsirairay dia izao tontolo izao. Miankina amin'ny fampiasanao ny famantaranandro sy ny fampandrenesana azonao, haharitra bebe kokoa na kely ny bateria.
Notsapaiko manokana ny Moto 360 tamin'ny Fanavaozana KGW42R izay mampanantena fahaleovan-tena hatramin'ny 28 ora amin'ny fampiasana antonony. Na dia mampihetsika ny fampandrenesana rehetra aza ianao dia manaova fikarohana am-peo sy fiasa hafa azo alaina dia ahena ho 16 ora.
Ny zavatra niainako manokana dia niovaova arakaraka ny andro. Mampiasà famantaranandro amin'ny fomba antonony, hijerena ny fotoana, raiso ny fampandrenesana ary ampiasao kely ireo safidy hafa amin'ny Moto 360, ny smartwatch dia naharitra iray andro tamiko nefa tsy nisy olana be loatra.
Saingy nisy andro iray izay na inona na inona antony dia nomeko tehina kely kokoa izy io ary eto dia namadika ahy tamin'ny fomba ratsy sy fadiranovana ny famantaranandro, namela ahy ho tafatsoaka tamin'ny 20:00 alina. Tsy azonao an-tsaina ny endrika adala anananao rehefa manao a Famantaranandro 250 euro izay tsy afaka milaza ny ora akory. Izany no antony maha-ilaina ny entana isan'andro.
Ary izany no Moto 360 tsy manana mpampitohy microUSB. Nilaza i Motorola tamin'izany fotoana izany fa maniry ny hanana endrika mitovy amin'ny famantaranandro mahazatra ny Moto 360, nefa tsy misy singa manavaka azy. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsara tarehy ny endriny, na dia mety hanelingelina aza ny filàna base charge tsy misy tariby.
Araka ny fantatrao tsara, ny Moto 360 dia miaraka a miorina amin'ny famoahana microUSB output izay, rehefa mametraka ny smartwatch, dia miasa toy ny famantaranandro. Raha ny fahitana azy dia toa tena tsara ary azonao atao koa ny mahita hoe ohatrinona no nampidirina azy. Tonga ny olana rehefa matory any ivelany ianao.
Raha misy antony tsy andanianao ny andro any an-trano ary aza raisinao miaraka aminao ny fotony, satria mampiasa Moto 360 be loatra ianao amin'ny ampitso dia tsy ho afaka handoa izany ianao, ka hanana famantaranandro mahaliana izay tsy milaza ny ora eny an-tananao mandra-pitondranao azy. Mazava ho azy, famantaranandro tsara tarehy, nefa tsy misy ilana azy.
Tsy tiako mihitsy io fijery io. Tsy manome tsiny an'i Motorola aho, satria ny fahombiazan'ny batterie an'ny mpifaninana lehibe aminy dia tsy ny hitifitra balafomanga koa, fa toa mampalahelo ahy ny tsy maintsy manefa famantaranandro isan'andro.
Ratsy ny tsy maintsy alaianao amin'ny toeran-kafa na aiza na aiza, ary mbola ratsy kokoa aza ny hoe, na inona na inona antony andanianao ny alina tsy lavitra ny tranonao, dia azo inoana fa tsy haharitra ela izany. Mazava ny didiko momba an'io: Mbola betsaka ny zavatra tokony hatsarany momba ny fahombiazan'ny bateria. Ary rehefa dinihina fa mitentina 250 euro ny fiambenana, dia tsy maintsy tadiavina ny vahaolana mba hahitana teknolojia mety kokoa.
Famerenana ny: Alfonso ny voankazo
Mifanaraka amin'ireo fitaovana Android
Fahaleovan-tena tena voafetra
Ny bara fanamoriana jiro eo amin'ny efijery dia mety hahasosotra
Ny Motorola Moto 360 dia smartwatch iray izay miavaka amin'ny ambiny noho ny endriny manintona sy ny famaranana kalitao. Fa ny fahombiazan'ny bateria dia mbola ratsy ihany, toy ny ankamaroan'ny smartwatches. Handoa vola 249 euro ve ianao amin'ny Moto 360? Amim-pahatsorana, ary amin'ny fiheverana fa ny fahombiazan'ny mpifaninana aminy dia mitovy, heveriko izany ny Moto 360 no safidy tsara indrindra.
Tsotra noho ny zava-misy io no famantaranandro manintona indrindra amin'izao fotoana izao, nahazoana alalana avy amin'ny G Watch R, izay mampiavaka ny Moto 360 raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminy. Saingy heveriko fa, na dia lamaody aza izao ny fitafiana anaovana akanjo dia betsaka no mila hatsaraina amin'ny lafiny teknolojia mba hahafahany mampiasa ireo fitaovana ireo isan'andro.
Hoy aho hoe, raha tianao ny famolavolana dia aza misalasala, tsy handiso fanantenana anao ny Moto 360, Manome toky anao aho. Fa raha ny olana momba ny fahombiazan'ny bateria dia iray amin'ireo teboka manandanja indrindra ho anao dia tsara kokoa ny miandry ny fizotran'ny smartwatches ho avy raha mahita ny vahaolana amin'ity olana ity izy ireo. Angamba miaraka amin'ny batery miolakolaka ...
Ary aza adino ny mitsidika ny faritra tsara indrindra aminay Fampiharana Android Wear, izay hasehonay anao ny tsara indrindra fampiharana ho an'ny akanjo tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Famerenana ny Moto 360, ny smartwatch manintona indrindra amin'ny Android Wear
Toa hadalana be amiko izy ireo, tsy hitako izay ampiasaina ho azy ireo na aiza na aiza
Fitepon'ny fony? Ao amin'ny 4 mafy dia anananao amin'ny famantaranandro dechatlon sy ny hafa
Ny fotoana? Fantatro amin'ny fijerena ny masoandro
Fampandrenesana? Mihomehy aho
Mpankafy ilay vaovao aho fa miandry kely
Tsy gelipollas aho ary tsy hamidinao amiko ny iray amin'ireny (farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny vidiny 20 euro) heh heh
Adinonao ny hatraiza hatraiza ny smartwatch 3, izay misy fahombiazana tsara indrindra ao ambadiky ny fitaovana s, izany hoe amin'ny antsasaky ny vidin'ity farany ary mora kokoa noho ny moto 360 sy ny r whatch
Fampiharana tsy maintsy ananana amin'ny Android Wear: Ankehitriny Browser Internet
Motorola hanamboatra takelaka indray rehefa hamarana amin'ny Lenovo ny fividianany an'i Google